Xiddiga Diirada U Saaran Chelsea Hulk Oo Loo Qabtay Ilaa Iyo Maanta Inuu Go’aan Ka Gaaro Mustaqbalkiisa. - jornalizem
Xiddiga Diirada U Saaran Chelsea Hulk Oo Loo Qabtay Ilaa Iyo Maanta Inuu Go’aan Ka Gaaro Mustaqbalkiisa.
Kooxda FC Porto ayaa siisay xiddigeeda reer Brazil Hulk ilaa iyo arbacada inuu go’aan kaga gaaro mustaqbalkiisa, iyadoo ay xiiseynayaan labo kooxood oo ka dhisan Premier League.
26 jirkaan ayaa kooxda reer Portugal ku soo biiray 2008dii, waxaana uu ilaa iyo waqtigaasi u saftay 98 kulan isagoo u dhaliyay 54 gool.
Xiddigaan oo u ciyaari jiray kooxdii reer Japan ee Tokyo Verdy ayaa noqday mid ka mid ah ciyaartoyda loogu hadalheynta badan yahay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxaana kooxda reer Portugal ay sheegtay haatan inay u qabatay muddo ciyaaryahanka inuu ku go’aansado mustaqbalkiisa, iyagoo sidoo kale xaqiijiyay inay xiiseynayaan labo kooxood oo Ingariis ah oo lagu soo waramayo inay kala yihiin Chelsea iyo Tottenham.
Ahaz Felleger ayaa u sheegay Antena 1: “Talaadada ama ugu badnaan arbacada waxaa jiri doona xal. Waxaa jira seddex dalab labo ka timid England iyo dalab ka yimid Zenit. Waxaana ay wadahadalo kula jiraan ciyaaryahanka iyo Porto.
“Inuu sii joogo Porto waa macquul. Waa uu ku qanacsan yahay halkaan, wax dhibaato ahna kuma uu qabo.”
Kooxda reer Portugal ayaa la fahamsan yahay inaysan dooneynin inay ku iibiyaan xiddigooda Hulk lacag ka yar lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa oo ah 100 milyan euro oo u dhiganta 78 milyan ginni.